Truth & Trust: မှင်တစ်စက် ... ဧရာဝတီအတွက် ဆင်းသက်ခဲ့ပြီ
မှင်တစ်စက် ... ဧရာဝတီအတွက် ဆင်းသက်ခဲ့ပြီ
“ ဒီနေ့ နင့်စောစော လာမှာလား”
တနင်္ဂနွေ မနက်ခင်းမှာ မီးဖိုထဲအလုပ်ရှုပ်နေသော မီ့ ကို သက်သက် က မေးလာသည်။
“ မမသက်၊ မမီအစ်ကိုကြီးကို ဘာလို့ စောစော လို့ ခေါ်တာလဲဟင် ” တစ်အိမ်တည်း အတူနေ မိန်မိန်း ၏ ထပ်ဆင့် အမေးစကား။
“ ဟားဟား သူ့ ကိုသာမေးကြည့် ၊ ငါကတော့ ချစ်ခြင်းအစ မြစ်လယ်ခေါင်က လို့ပဲ အစဖော်ပေးမယ် ”
သူတို့ နှစ်ယောက်ကို ပြုံး၍ကြည့်နေမိသော မီ့မျက်ဝန်းထဲသို့ စီးဝင်လာတဲ့ အတိတ်က အရိပ်များက ကြည်နူးဖွယ်ရာ။ တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်မှာပေါ့ ….. ။
မီတို့ကျောင်းက ဘုရားဖူးခရီးထွက်ကြတော့ Express ကား၂စီးဖြင့် ။ လိုက်ပါလာသည့်ကျောင်းတော်သူ ကျောင်းတော်သားတွေက ၂ စီးစာမကလေတော့ ယောကျာင်္းလေး အများစုက ထိုင်တလှည့်ရပ်တချီ။ ပုဂံမှာ စွယ်တော်လေးဆူဖူးတော့ မနက်လေးနာရီထပြီး တန့်ကြည်တောင်ဘုရားကို အရင်ဆုံးသွားကြသည်။ အသွားတုန်းက မှောင်နေလို့ မော်တော်ပေါ်မှာ ဓါတ်ပုံမရိုက်ခဲ့ရသမျှ အပြန်မှာ အတိုးချရိုက်ကြသည်။ နံနက်နေခြည်နဲ့ လေနုအေးအေးမှာ ငြိမ့်ငြိမ့်သာယာ စီးဆင်းနေတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးနောက်ခံထားလို့ ဓါတ်ပုံရိုက်အပြီး သက်သက်က ပြူးတူးပြာတာနှင့် တိုးတိုးကပ်ပြောသည်။
“ ငါ့အိတ် ငါ့အိတ် ဟိုတစ်ယောက်ယူပြီး ခေါင်းဦးထားတယ် ”
သက်သက်ပြရာကြည့်လိုက်တော့ ကျောင်းမှာမြင်ဖူးနေသော ကျောင်းသားတစ်ယောက် သက်သက်ရဲ့ အိတ်ကို ခေါင်းဦးကာ မော်တော်၏ဘေးခုံတန်းမှာ လဲလျောင်းနေသည်။
“နေပါစေဟယ် သူတို့က ကားပေါ်မှာတုန်းကလည်း ကောင်းကောင်းထိုင်ရ အိပ်ရတာမဟုတ်ဘူး၊ မနက်ကလည်း အစောကြီး ထလာရတာ၊ မော်တော်စီးတုန်း နာရီဝက်လောက်ပဲဟာ၊ နင့်အိတ်ယူပြေးတာမှ မဟုတ်ဘဲ။ ဟုတ်တယ်နော် ခိုင်ဇာ ”
“အေးလေ နင့်အိတ်ထဲမှာ အနွေးထည်ပါတယ်မဟုတ်လား၊ အဲဒါကြောင့် အိပြီး အိပ်လို့ကောင်းလို့ နေမှာပေါ့၊ သူယူပြေးလို့ မရပါဘူး၊ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးက နင့်ဘက်မှာရှိတယ်။ မပူနဲ့ ”
“မဟုတ်ဘူးဟဲ့ ၊ ငါ့အိတ်ကို ယူအိပ်တာကြောင့်မဟုတ်ဘူး၊ အထဲမှာ စောစောတုန်းက တောင်ပေါ်မှာ ငါယူတတ်တဲ့ နင့်မျက်မှန်၊ ငါဒီအတိုင်းထည့်ထားတာ ၊ သူ့ခေါင်းကြီးနဲ့ဖိမိရင် ကျိုးပြီပဲ ”
“ အဲတော့ ငါ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ ငါ့အမဟာ ငှားလာတာ ”
မီတို့ သုံးယောက်ထိုကျောင်းသားထံမှ အိတ်ပြန်တောင်းရန် ကြံစည်ဆဲမှာ သူက ခေါင်းကို အိတ်ပေါ်မှ လျှောချလိုက်ပြီး ဆက်အိပ်နေသည်။
“ အိပ်ပျော်မနေဘူးဘဲ၊ ငါတို့ပြောတာကြားသွားပြီ ” ခိုင်ဇာ့ တီးတိုးမှတ်ချက်သံ အဆုံးမှာ သက်သက်က အိတ်ကို ဖျတ်ခနဲထဆွဲလိုက်သည်။ မီ က အိတ်ထဲမှ မျက်မှန်ကို ကမန်းကတန်းရှာရသည်။
လောကနန္ဒာဘုရားရောက်တော့ နေ့လည်နေ့ခင်းမို့ ခဏနားကြသည်။ ဘုရားခြေရင်း သစ်ပင်ရိပ်က မြစ်ကိုမျက်နှာမူထားသော ကျောက်ခုံတန်းမှာ ထိုင်နေတုန်းသူရောက်လာသည်။
“ ခုနက အိတ် … ဟို …. မျက်မှန်ကျိုးသွားလားလို့ ”
“ သြော် .. ဟင့်အင်း .. မကျိုးပါဘူး ၊ မော်တော်ပေါ်ကကိစ္စအခုမှ လာပြောနေတယ်၊ ကျိုးလို့ကတော့ အလျော်တောင်းပြီးရောပေါ့ ”
“ အဲ အဟဲ… ကျွန်တော် … အိပ်ရေးပျက်ပြီး ခေါင်းနည်းနည်းနောက်သွားလို့ပါ ၊ ဟို ၂ ယောက်ရော ”
“ သွားစားကြတာမဟုတ်ဘူးလေ၊ သွားဝယ်ကြတာ၊ တမင်နေခဲ့တာ ”
“ ဟာ ခုံဦးထားတာကြီးကတော့ မကောင်းပါဘူးဗျာ ”
“ အမယ် … လူကိုများ တသက်လုံးနေရာမဖယ်ပေးတော့မှာကျနေတာပဲ ” မီ တို့ တူတူရယ်မိကြသည်။
“ တမင်လိုက်မသွားတာ၊ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ငေးချင်လို့ ၊ တွေးချင်လို့ ”
“ မမီက ဘာတွေတွေးတာလဲဗျ၊ အဲ …. မဖြေချင်လည်း မဖြေနဲ့နော် ၊ ကျွန်တော်က ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး မေးလိုက်မိတာ ”
“ ရပါတယ်၊ မီ တွေးနေတာ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးနဲ့ အနော်ရထာမင်းကြီး ၊ ပြီးတော့ ဒီလောကနန္ဒာဘုရား။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့  စွယ်တော်ကို ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းကပင့်ဆောင်လာတော့ အနော်ရထာမင်းကြီးက လောကနန္ဒာရေဆိပ်ကနေ ရေထဲအထိဆင်းပြီး ဦးကင်းထက်က ပင့်ဆောင်ခဲ့တယ်လေ။ အဲဒီ့ပုံရိပ်ကို အခုမျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်ကြည့်တာ။ အင်မတန်ဘုန်းတန်ခိုးကြီးတဲ့ ဘုရင်တစ်ပါးဟာ သာသနာတော်အကျိုး၊ ပြည်သူတွေအကျိုးအတွက် ရာဇမာန်ကို နှိမ့်ချနိုင်ခဲ့တာ ဘယ်လောက် အတုယူစရာကောင်းလဲလို့။ နောက်ပြီး ပုဂံခေတ်မှာ ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားခဲ့တာ အနော်ရထာမင်းရဲ့  ကျေးဇူးဆိုရင်၊ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးရဲ့  ကျေးဇူးလည်း မကင်းဘူးလို့ ၊ မြန်မာပြည်မှာ ဧရာဝတီဆိုတဲ့ မြစ်ကြီးတစ်စင်းရှိနေတာ ဘယ်လောက် ဂုဏ်ယူစရာကောင်းလဲ၊ ကျက်သရေရှိလဲနော် ”
သူက ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ ပြုံး၍သာ မြစ်ဧရာကို လှမ်းကြည့်နေပါသည်။ နေပါဦး စကားတွေသာပြောနေတာ သူက မီ့နာမည်ကိုသိနေပြီး မီကဖြင့် မသိရသေး။
“ နာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲဟင် ”
“ ဖော်ဒေါ်ခန်း ”
“ ဘာ … ဘာ ခမ်း … ဘာလူမျိုးလဲဟင် ” သူ့ စကားလေယူလေသိမ်းအရ တိုင်းရင်းသားမှန်းသိပေမယ့် ဘာတိုင်းရင်းသားမှန်းမသိ၍ မီ မေးလိုက်မိသည်။
“ ဖော်ဒေါ်ခန်း ပါ ။ ကချင်မျိုးနွယ်ထဲကပဲ ဆိုပါတော့ ”
ဒီလိုနှင့် ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းနဘေးမှစတင်ကာ ဤကချင်လူငယ်လေးသည် မီ့ ဘဝထဲသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ထိုကချင်လူငယ်လေးအား အဖြေပေးရန်အတွက် ကချင်မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းထံမှ သင်ယူခဲ့ပြီး သက်သက်နဲ့ ခိုင်ဇာ တို့ရှေ့မှာ “ စောရအိုင်” ဟု ရွတ်ဆိုမိရင်းက ခေါ်ရခက်သော သူ့အမည်အတွက် “ စောစော” ဟူသော အမည်သစ် ရသွားရှာတော့သည်။
အတိတ်က အကြောင်းတွေက ပြန်တွေးတိုင်း ကြည်နူးရသည်။ မီတို့ရဲ့  အတိတ်ကို ဧရာဝတီမြစ်ကြီးနှင့် ခွဲခြားမရ။ မီတို့မှ မဟုတ်ပါဘူးလေ။ မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့ကို ခွဲခြားလို့မရတာပါ။ မြန်မာပြည်ရဲ့  သမိုင်းကို ဧရာဝတီမြစ်ကြီးက သယ်ဆောင်စီးဆင်းနေတာပဲ။
ဒါပေမယ့် ဧရာဝတီရဲ့  သမိုင်းကရော …..
နောင်တစ်ချိန် လောကနန္ဒာဘုရားခြေရင်းက ကျောက်ခုံတန်းမှာ ထိုင်ခွင့်ကြုံခဲ့ရင် မီတို့ချစ်သော ဧရာဝတီမြစ်ကြီးက အနော်ရထာမင်းကြီးအကြောင်း ပြောပြနိုင်ပါဦးမလား။
“ မမမီရေ ကိုကြီးစောစော ရောက်လာပြီ”
မိန်မိန်းရဲ့ အော်သံကြောင့် ပြုံးရသည်။ စကာင်္ပူကို ရောက်ကာမှ မီတို့ တွေ့ရချိန်တွေ နည်းသွားတော့သည်။ မီက စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ပုံမှန်ရုံးပိတ်ပေမယ့် သူ့အလုပ်က လေးရက်တက် တစ်ရက်နား။ သူနားတဲ့ရက်က စနေ၊ တနင်္ဂနွေဖြစ်မှ အိမ်မှာဆုံဖြစ်သည်။ ဟင်းချက်ပျင်းသောမီသည် သူလာမည့်နေ့တွေမှာတော့ မီးဖိုထဲတွင် အလုပ်ရှုပ်နေတတ်သည်။
“ ဒီနေ့ နောက်ကျတယ်”
“ ဟုတ်တယ်၊ ကိုယ် စာနည်းနည်းဖတ်နေလို့၊ ဒီနေ့ဘာကျွေးမှာလဲ”
“ ဘာမှချက်မထားဘူး၊ ဒီနေ့ မောင်ချက်ကျွေးတာ စားမလားလို့ ” တစ်နာရီခန့် နောက်ကျ ရောက်လာသော မောင့်အား စိတ်ကောက်ချင်ပါသည်။
“ ချက်ကျွေးတာ စားမယ်ဆိုရင် သင်လိုက်ဦးမယ်၊ ကရင်ပိန်းဥဟင်းချက်တတ်ဖို့ ကရင်မလေးနဲ့သင်၊ ရခိုင်ငပိထောင်းကတော့ ရခိုင်မလေးနဲ့သင် ”
သူ့စကားကြောင့် မျက်မှောင်ကြုတ်ကာ “ ဟွန်း ” လုပ်လိုက်မိသည်။
“ မနာလိုဖြစ်တာလား ”
“ ဖြစ်ပါဘူး၊ ဒီနေ့ ပဲကုလားဟင်းချက်တယ်၊ သူပြောမှပဲ . . . ”
“ ဟင်.. သြော် … ဟားဟား … ကိုယ်မပြောဘူးနော်၊ ကုလားကြီးဆီက သင်တယ်လို့ ကိုယ်မပြောဘူး ”
သူ့စကားကြောင့် သက်သက်ရော မိန်မိန်းပါ လိုက်ရယ်ကြသည်။ ဤသို့ ပျော်ရွှင်ရယ်မောစရာတွေသာ ပြောဆိုနေရရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲနော်။ ဒါပေမယ့် ရင်ထဲရော ခေါင်းထဲကပါ မထွက်နိုင်သော အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ထမင်းစားပွဲမှာ မီ ကပဲ စပြောမိသည်။
“ ကုလားကြီးဆိုလို့ ၊ ဟို တရုတ်တွေမြစ်ဆုံမှာ ဆည်ဆောက်မယ့်သတင်း၊ အီးမေးလ်တွေရတယ် မဟုတ်လားမောင် ”
“ ရတယ်လေ၊ ဒီမနက်နောက်ကျနေတာ ပိတ်ရက် အချိန်ရတုန်းလေး EIA Report ဖတ်နေလို့ ”
“ နှမျောလိုက်တာမောင်ရယ်၊သူ့ဟာသာသူ သာယာလှပငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ နေရာလေးတစ်ခု၊ အဲဒီ့စီမံကိန်းတွေသာ အကောင်အထည်ပေါ်သွားရင် အဲဒီ့ဒေသဟာ အရင်လိုဘယ်တော့မှ ပြန်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး ”
“ သူအရင်လို ပြန်မဖြစ်တဲ့အတွက် တခြားအရင်က မဖြစ်ဘူးသေးတာတွေ ဖြစ်လာမယ်လေ၊ ကောင်းတာကော ဆိုးတာကော ”
“ ဟုတ်တယ် ဖြစ်မယ်၊ တောတွေပြောင်မယ် ၊ တောင်တွေကတုံးဖြစ်မယ်၊ ရှားပါးတိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့  အရိုးတွေ၊ အရေတွေ၊ အစွယ်တွေလည်း သူတို့ဈေးကွက်မှာပိုပေါလာမယ်၊ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့  အိမ်တွေ စိုက်ခင်းတွေပျောက်မယ်၊ စိုက်စရာ တောင်ယာမရှိတော့ ဘာသွားစားရမှာလဲ၊ စိုက်ပျိုးရေးဘဲ လုပ်တတ်တဲ့ တောင်ယာသမား သူတို့ဆောက်တဲ့ နေရာတွေမှာ ဘယ်နေရာအလုပ်ပေးမှာတဲ့လဲ။ ပြောလိုက်သေးတယ် အဲဒီ့ တရုတ်က ၁၀၀၀၀ ကျော်ဆိုတာ မများပါဘူးတဲ့။ ၁၀၀၀၀ လည်းလူပဲ တစ်ယောက်လည်းလူပဲ။ လူတွေကို လူလို့မြင်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်။ မီကတော့ စာတွေရေးဦးမယ် ” ဘယ်သူ့ကိုစိတ်တိုလို့ ဘယ်ကိုပြောရမှန်း မသိသော မီ့ ဒေါသများ မောင့်အပေါ်ပုံကျသွားသည်။
“ ဖြည်းဖြည်းပြောပါ မီ ရဲ့  ၊ ထမင်းစားရင်း ဒေါသမထွက်နဲ့လေ၊ ကိုယ်က အဲဒီ့စီမံကိန်းကြီးက ကောင်းပါတယ်လို့ ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီစီမံကိန်းကစနေတာကြာပြီ ။ နှစ်နဲ့ချီနေပြီ ။ မီ က အခုမှ ဘာမှ ဂဃဏန မသိဘဲ ဘာကိုဘယ်လိုသွားရေးမလဲ။ မီ့ဟာမီ ဒေါသတွေထွက်နေတာ မပင်ပန်းဘူးလား ”
မောင့်စကားကြောင့် မီ ခဏမျှငြိမ်ကျသွားသည်။ မီက တစ်ခုခုဆို ဆူညံပေါက်ကွဲလို့ ဒေါသကြီးတတ်သူ။ မောင်က သွေးအေးပြီး အရှည်သဖြင့် စဉ်းစားတတ်သူ။ ထို့ထက်ပို၍ မောင်မွေးဖွားကြီးပျင်းရာ ဒေသကြီး ပျက်စီးမှာကို မောင်က ပျော်နေပါ့မလား။
“ သူတို့လုပ်တဲ့သူတွေက ပညာရှင်တွေလေ၊ အဲဒီ့ပညာရှင်တွေကို သူတို့ထက်မနည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်တွေကသာ ဝေဖန်ချိန်ထိုးပြပေးနိုင်မှာ၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကတော့ ကဏ္ဍစုံမသိနိုင် ဝေဖန်မပေးနိုင်ဘူး။ အကုန်သိတယ်တတ်တယ် လုပ်လို့မရဘူး။ မီက ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘာမှ ဂဃဏနမသိဘဲ သွားဝေဖန်မယ်ဆိုရင် ထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ရေမစီးတော့မှာစိုးရိမ်တယ်ဆိုရင် မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ဘယ်လောက်ကိုဆည်ထဲသိမ်းပြီး ဘယ်လောက်ကို လွှတ်ပေးမှာပါဆိုပြီး တရုတ်ပညာရှင်တွေက ပြန်ရှင်းမှာပဲ။ မီက အဲလိုဖြေရှင်းချက်တွေလိုချင်တာလား၊ လုံးဝရပ်တံ့ စေချင်တာလား ပြတ်သားအောင်ရေးရမယ်။ ဒေါသအလျောက် ခံစားချက်အလျောက် ရှောက်ရေးတာထက်၊ ဧရာဝတီကို မပျက်အောင်၊ မြစ်ဆုံကို မပျောက်အောင်၊ ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမယ်ဆိုတာကို ရေးတာ ပိုကောင်းတာပေါ့ ”
“ အဲဒီ့ တရုတ်တွေကလည်း သူတို့မြေမှာ သူတို့မြစ်ကြီးတွေကို ဖျက်ဆီးလို့ အားမရလို့ မီတို့ မြေကို လာဖျက်ဆီးနေတာ။ သူတို့ဖျက်ဆီးတာတွေကြောင့် လူတွေ၊တိရိစ္ဆာန်တွေ ဒုက္ခရောက်နေတာကို သူတို့ပြည်ထဲကအဲဒီ့ မြစ်သေကြီးတွေ သက်သေရှိပါလျက်နဲ့ ဗြောင်လိမ်နေကြတယ်။ လောဘကြီးလိုက်တာလည်းလွန်ရော။ သူတို့တရုတ်တွေပဲ ဦးဆောင်၊ သူတို့တရုတ်တွေကိုပဲ အလုပ်ခန့်၊ ဒါကြီးပြီးသွားလည်း သူတို့တရုတ်တွေပဲ ပညာရှင်တွေပါဆိုပြီး ချုပ်ကိုင်ထားဦးမှာ။ မြန်မာပြည်ရဲ့  ခေါင်းတစ်ပိုင်းကို သေနတ်တစ်ချက် ဖောက်စရာမလိုဘဲ ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာ။ မြန်မာပြည်ကို တရုတ်ကိုလိုနီလုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ။ ”
“ မမမီ သုံးတဲ့ စကားလုံးကို နည်းနည်းလောက်တော့ ပြင်ပေးပါလား။ ” ထမင်းပန်းကန်လေးကိုင်ကာ စားပွဲဝိုင်းသို့ရောက်လာသော မိန်မိန်းက မီတို့နှစ်ယောက်ရဲ့  ဆွေးနွေးပွဲထဲသို့ ပါဝင်လာသည်။
“ သူတို့တရုတ်ဆိုတာထက် ပြည်ကြီးတရုတ်လို့ပြောတာ ပိုမှန်မယ် မမမီရဲ့  ။ မိန်မိန်းတို့က မြန်မာပြည်မှာမွေး မြန်မာပြည်မှာကြီးတဲ့ တရုတ်လူမျိုးစစ်စစ်တွေပါ။ အဲဒါထက်ပိုပြီးတိတိကျကျပြောရင် အဘိုးတွေအဘေးတွေ လက်ထက်ကတည်းက ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးက ပြည်မြို့ မှာနေလာကြတာ။ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို ဧရာဝတီမြစ်ထဲရေဆင်းချိုးလို့ မြစ်ကမ်းပါးမှာဆော့လာတာ။ မမမီတို့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ချစ်သလို မိန်မိန်းတို့လည်းချစ်ပါတယ်။ ဧရာဝတီကို ထိခိုက်မှာ မိန်မိန်းတို့လည်းစိုးရိမ်တယ်။ တရုတ်လူမျိုးဆိုပေမယ့် ပြည်မြို့ က ပဲပြုတ်စားပြီးကြီးလာတာပါ။ တရုတ်ပြည်မကြီးကောင်းစားပြီး ကိုယ့်မြန်မာပြည်က ပြည်သူတွေစိတ်ဆင်းရဲမှာ၊ ဒုက္ခရောက်မှာ၊ ငတ်မှာတော့ မလိုလားဘူး။ ကိုယ်မွေးဖွားကြီးပျင်းရာမြေထက် ပိုပြီးချစ်ခင်တွယ်တာစရာ မရှိဘူး။ မမမီတို့ထက်ပိုပြီး ဒီမှာရှိတဲ့ စလုံးတရုတ်၊ မလေးရှန်းတရုတ် ၊ ပြည်ကြီးတရုတ်မတွေကို ခင်တွယ်လို့ မရသလိုပေါ့ ”
“ အေးပါ အေးပါ အစ်မ စကားလုံးကိုပြင်ပါ့မယ်။ မိန်မိန်းက မြန်မာပြည်နဲ့ဧရာဝတီကိုချစ်တဲ့ မြန်မာပြည်က တရုတ်မလေးမှန်း အစ်မ သိပါတယ် ”
“ ချစ်တယ်မမမီရေ ချစ်တယ်၊ အခု ဧရာဝတီကိုကျွန်တော်တို့လည်းချစ်ပါတယ် လို့ ငိုချင်းချနေသူတွေထက်ကို ပိုတန်ဖိုးထားသေး ချစ်သေးတယ် ၊ ဘယ့်နှယ့် မြစ်ဖျားတွေနဲ့ မြစ်ဆုံမှာမှ လာဆောက်ရတယ်လို့ ၊ မီးမလင်းရင်နေပါ ၊ မဆောက်ကြပါနဲ့၊ မိန်မိန်းကတော့ လုံးဝ ကန့်ကွက်တယ် ”
မိန်မိန်းစကားကြောင့် မောင်က ဘယ့်နှယ့်ရှိစဆိုသော အပြုံးမျိုးဖြင့် မီ့ကို ကြည့်ကာပြုံး သည်။
“ ဟုတ်ပါတယ်လေ၊ မောင်ပြောသလို ဒေါသများတော့ အမှားပါတတ်တာပေါ့။ မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခံစားချက်ကိုတော့ ပစ်ပယ်ထားလို့ မရဘူးမောင်ရဲ့ ။ လူတွေက စက်ရုပ်တွေမဟုတ်ဘူး။ လောကမှာ ငွေပေးဝယ်မရတဲ့ အရာတွေလည်းရှိသေးတယ်။ ငွေနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရတဲ့ အရာတွေလည်းရှိတယ်။ ငွေပေးတိုင်းရောင်းလို့ မရတာတွေလည်းရှိတယ်။ မြစ်ဆုံဆိုတာ ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့  တန်ဖိုးထားရာနေရာ။ ထားပါတော့ သူတို့ပြောသလို ဧရာဝတီမြစ်ကြီး မပျက်စီးအောင် စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ပဲထား ။ မျက်စိစုံမှိတ် ကြိတ်မှိတ်ပြီးယုံလိုက်ရတယ်ပဲထား။ မြစ်ဆုံကတော့ ပျက်စီးပြီ။ ကချင်ရဲ့ ဒေသ တော်တော်များများက သဘာဝအတိုင်းမရှိတော့ဘူး။ ဆည်ကြီး ခုနှစ်ခုစာ တောတွေပြုန်း တောင်တွေကတုံးဖြစ်တော့ရော ရာသီဥတုတွေ မပြောင်းလဲတော့ဘူးတဲ့လား။ ကချင်ဆိုတာလည်း မီတို့ လူမျိုးတွေထဲက တစ်မျိုးပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ မီတို့လူမျိုးတွေ ခံစားရတာတွေကို ပြန်ရလာမယ့် ငွေကြေးအကျိူးအမြတ်နဲ့ လဲလှယ်ရမှာလား။ တိုးတက်ဖို့လုပ်တာဆိုရင် ဘာတိုးတက်မှာလဲ ဆိုတာလည်း ပြန်ကြည့်ရဦးမယ်လေ။ ရုပ်ဝတ္ထုတွေ တိုးတက်လာပြီး စိတ်ဓါတ်တွေ အောက်ဆုံးထိုးဆင်း ကုန်မယ်ဆိုရင်ရော ဒီတိုးတက်တာကို လက်ခံရမှာလား။ ရုပ်ဝတ္ထုတွေတိုးတက်လာက မျက်စိနဲ့မြင်ရ တွက်ချက်လို့ရပေမယ့် ၊ စိတ်ရဲ့  ဒဏ်ရာ ခံစားချက်တွေက တိုင်းတာလို့ မရဘူးမောင်။ တကယ့်တကယ်တမ်း ဒီဆည်ကြောင့် ဘေးအန္တရယ်ဖြစ်လာရင် သူတို့က ဘာတာဝန်ယူမှာမို့လဲ။ ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာအပြင် ဘာလုပ်ပေးမှာမို့လဲ။ ဖြစ်ပြီးတော့မှ လိုက်ကယ်ဆယ်ရေးတွေ လုပ်တာထက်၊ မဖြစ်သင့်တာကို မဖြစ်အောင် အစကတည်းကြိုတင်ကာကွယ်ရမှာ မဟုတ်ဘူးလား။ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့  ခံစားချက်၊ လူမျိုးစုတွေရဲ့  လိုအပ်ချက် မောင်က မီ့ထက်ပိုသိမှာပါ ”
မီ့ရဲ့  စကားတွေကြောင့် မောင့်ရဲ့ အေးဆေးတဲ့ မျက်နှာက ပိုလို့ တည်ငြိမ်သွားတော့သည်။
“ သိတာပေါ့ မီရယ်၊ သိတာပေါ့ ၊ ကိုယ်က အဲဒီ့ဒေသမှာ ကြီးပျင်းလာခဲ့တာပဲ။ နေရာတွေက ခေါင်တယ်၊ သွားရလာရခက်ခဲလို့ ဒီမြစ်ကြီးကိုပဲ အားကိုးကြရတယ်။ လူတွေက ဆင်းရဲတယ် ရိုးသားတယ်။ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု နှေးကွေးလို့ ဗဟုသုတနဲတယ်။ ကိုယ်တို့ငယ်ငယ်ကဆို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ အစိုးရတပ်တွေ တိုက်ပွဲတွေခဏခဏဖြစ်၊ တစ်ချိန်လုံး ပစ်လိုက်ကြတာ တဝုန်းဝုန်း သေလိုက်ကြတာ အတုံးအရုံး။ ဘုမသိဘမသိ ကလေးငယ်တွေ ဘယ်လိုနေကြမလဲ စဉ်းစားသာကြည့်။ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေယူပြီး အပစ်အခတ်တွေရပ်စဲထားကြလို့ နည်းနည်းတော်သွားရာက အခုဒီကိစ္စကြောင့် ပြန်ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့မြေကို လာထိလို့ ကချင်က ဆည်မဆောက်နိုင်အောင် ဟန့်တား၊ ဆောက်နေတာက ပြည်မက တရုတ်တွေ၊ ဆောက်လုပ်ရေးသမားတွေ မထိခိုက်အောင် အစိုးရတပ်က ကာပေး။ နောက်ဆုံးတော့ ပြည်မတရုတ်တွေကို ကာပေးရာက ကိုယ့်လူမျိုးချင်း တိုက်ရတဲ့ အဖြစ်ရောက်ရော။ မြန်မာတပ်ကပဲကျကျ ကချင်တပ်ကပဲကျကျ ပြည်မတရုတ်တွေက အနေသာကြီးပဲ၊ သူတို့က သူတို့လုပ်ငန်းပြီးဖို့ပဲကြည့်မှာလေ ”
“ ကိုယ် ၃ တန်းတုန်းက ကိုယ်တို့ဒေသမှာ ရေကြီးမြေပြိုတာတွေ တစ်ခါကြုံဖူးတယ်။ ၃ တန်းဆိုတော့ ၁၉၈၇ လောက်ကဖြစ်မယ်။ ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆို အခုထိကို အဲဒီ့အဖြစ်အပျက်တွေက မမေ့နိုင်ဘူး။ ကိုယ့်အမေဘက်ကဆိုရင် ရွာလုံးကျွတ်နီးပါး ရေထဲမျောပါသွားတာ။ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ဆိုတာ တိတိကျကျ ကြိုတင်တွက်ချက်လို့ ရတာမဟုတ်ဘူး။ အထူးသဖြင့် ငလျင်။ တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် အပြစ်မရှိတဲ့ ပြည်သူတွေပဲဒုက္ခရောက်မှာ။ စိတ်ဒဏ်ရာတွေကြောင့် နာကျည်း၊ နာကျည်းတော့ ပြန်ချချင်၊ ချချင်တော့ လက်နက်ကိုင်တောထဲဝင်နဲ့၊ သံသရာက ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီအတိုင်းသာဆို တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးဆိုတာ ဆောင်ပုဒ်ထဲမှာပဲ ရှိနေလိမ့်မယ် ”
စကားအဆုံးမှာ မောင်က ထမင်းလတ်စသတ်သည်။
“ စိတ်မကောင်းပါဘူးကွယ်၊ မီက ထမင်းစားပြီးမှ စကားဝိုင်းစသင့်တာ အခုတော့ အားလုံးထမင်းစားပျက်ကုန်ပြီ”
“ မပူနဲ့ မမမီ ၊ မိန်မိန်းကတော့ မပျက်ဘူး၊ သူတို့ဘက်က မရပ်သရွေ့  ရပ်အောင်တောင်းဆိုဦးမှာဆိုတော့၊ အားမရှိလို့ မဖြစ်ဘူး၊ အဝစားထားမှ ”
“ ထမင်းစားပြီး စကားဝိုင်းဆက်လို့တော့ မဖြစ်ဘူး။ အခုဒီမှာ ကိုယ်တို့ လေးယောက်ရှိတယ်။ စာဖတ်တဲ့သူကလည်း စာတွေဖတ်ပြီး စိုးရိမ်နေတယ်၊ သတင်းကြားတဲ့သူကလည်း သတင်းတွေနားထာင်ပြီး စိတ်ပူနေရတယ်။ အဲလိုထိုင်စိုးရိမ်ပြီး ပြစ်တင်စကားတွေ ပြောနေမယ့်အစား မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံး စုပေါင်းပြီး ဘာလုပ်သင့်တယ်၊ မြစ်ဆုံကိုဘယ်လို ထိန်းသိမ်းရမယ် ဧရာဝတီကို ဘယ်လို ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာ အဖြေရှာရမှာ။ လောလောဆယ် ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက သမ္မတကြီးဆီပို့မယ့် ဆည်တည်ဆောက်ရေးတွေ ရပ်ဆိုင်းပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလွှာမှာ လက်မှတ်ထိုးရမှာ။ ဒါအခုအချိန်မှာ ကိုယ်တို့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အလုပ်သင့်ဆုံး။ ဒါ မြန်မာပြည်နဲ့ဧရာဝတီကို ချစ်သူတိုင်း မလုပ်နိုင်စရာ အကြောင်းပြချက် မရှိသင့်တဲ့ အလုပ်ပဲ။ ကိုယ်တို့ တင်ပြရမယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေ ဒီလိုတော့ စိုးရိမ်နေပါပြီဆိုပြီး သိလာအောင်ပြောရမယ်။ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်မို့ ငွေ၊လျှပ်စစ် ဘာနဲ့ဖြစ်ဖြစ် မလဲနိုင်ဘူးဆိုတာ ပြောရမယ်။ ပြီးတော့ ဒီ့ထက်ရှေ့ ဆက်ပြီးလည်း စာပေဟောပြောပွဲတွေဟော၊ သီချင်းတွေလွှင့် ၊ သတင်းမှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်တွေပြလို့ တောင်းဆိုရမယ်။ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ သက်သေပြလို့ တားဆီးရမယ်။ ” ပြောနေရင်းမှ ခဏရပ်လို့ မီ့ဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။
“ မီ အင်္ကျိလဲ၊ ကိုယ်တို့ မေတ္တာရပ်ခံလွှာမှာ လက်မှတ်သွားထိုးရအောင် ”
“ ပင်နီဇူလာပလာဇာက လမ်းပြကြယ်မှာဟုတ်၊ မိန်မိန်းလည်း ဒီညနေသွားမှာ ” မိန်မိန်းရဲ့  အမေးကို မောင်က ပြုံးကာခေါင်းညိတ်လိုက်ချိန်မှာ တစ်ချိန်လုံး နားထောင်သူသာလုပ်နေသော သက်သက်ကပြောလိုက်သည်။
“ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရုံးကအပြန် ငါလည်းသွားမယ် ”
လက်မှတ်ထိုးပြီး အပြန် တနင်္ဂနွေ ညနေဆိုပေမယ့် စီးတီးဟောဘူတာမှာ လူများလွန်းလှသည်။ ရထားလာတော့လည်း မီတို့ ထိုင်စရာနေရာမရ။ တိုင်ကို ကိုင်ထားသော မောင့်လက်မောင်းကို ခေါင်းမှီလို့ မောင်ပြောတာတွေ နားထောင်ရင်း လိုက်လာခဲ့သည်။ Buona Vista ရောက်ပြီ။ သက်ပြင်းရှည်ကြီးချမိတော့ မောင်က လှည့်ကြည့်သည်။
“ ကြည့်လိုက်ပါဦး မောင်၊ အခု မီတို့ ဒီရထားလမ်း ပေါ်က အပေါ်စီးက မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကို၊ ကိုယ့်မျက်စိတစ်ဆုံးပဲကြည့် ရထားလမ်းရဲ့  ဟိုဘက်ရော ဒီဘက်ရော အကျယ်ကြီးပဲ။ ဒါတောင် Buona Vista တဝိုက်ပဲရှိသေးတာ။ မီ ဘယ်လိုမှ စဉ်းစားမရဘူး။ စင်္ကာပူနိုင်ငံ အရွယ်အစားရှိတဲ့ ရေကာတာဆိုတာ။ အဲဒီ့လောက်ကြီး လိုအပ်လို့လား။ ဧရာဝတီမှာ ဆောက်မှတဲ့လား။ မီ ဘယ်လိုမှ လက်ခံလို့ မရဘူး။ ”
“ လက်မခံနိုင်ရင် ကိုယ်တို့ ဆက်ပြီးငြင်းဆန်ရမှာပေါ့ ၊ ဆက်ပြီး တောင်းဆိုရမှာပေါ့။ ဒါဟာ ကချင်လူမျိုးတို့ရဲ့  အရေးပဲမဟုတ်ဘူး မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးအရေး။ ဧရာဝတီဆိုတာ မြန်မာပြည်ကို ကိုယ်စားပြုထားတာ၊ မြစ်ကြီးမရှိရင် မြန်မာပြည် ဆိုတာရော ရှိပါဦးတော့မလား။ ကိုယ်တို့ရဲ့  မျိုးဆက်သစ်တွေကို ခြောက်ခန်းနေတဲ့မြစ်ကြီးပေးခဲ့ရင် ကိုယ်တို့ တရားပါ့မလား။”
“ ဟုတ်တယ် မောင် ၊ မီ တို့ ရှေ့ကိုဆက်ရမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး နိုင်တဲ့ဘက်က နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ တာဝန်ယူပြီး ဆက်သွားရမယ်။ မီ လည်းကတိပေးတယ်မောင်၊ ကလောင်လက်နက်က ဓါးသွားတဲ့ထက်တယ်တဲ့ ၊ မီ ရေးတဲ့ မှင်တစ်စက်က ဧရာဝတီ ဆက်စီးဆင်းမယ့် ရေတစ်စက်ဖြစ်စေရမယ် ”
ရေတစ်စက်က မြစ်ကြီးဆက်စီးဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုနိုင်ပေမယ့် ၊ ရေစက်တွေ စုပေါင်းလို့ပဲ ချောင်းတွေမြစ်တွေ ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတော့ မေ့မထားသင့်ပါဘူးကွယ်။
Posted by ညိုလေးနေ at 11:40 PM
လက်မခံနိုင်ရင် ကိုယ်တို့ ဆက်ပြီးငြင်းဆန်ရမှာပေါ့...
ဒါ အသေချာဆုံးပဲ...း)
We must try to stop their project and save our Irrawaddy. Let continue to fight them.
ဧရာဝတီမြစ်ကြီးက မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးအတွက် မရှိမဖြစ်ပါ ဒါကြောင့် ဧရာဝတီအတွက် တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ကာကွယ်သွားမှာပါ ....
မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းအား လုံးဝကန့်ကွက်ပါသည်
ဧရာဝတီအတွက် တစ်တပ်တစ်အား ဖြစ်တဲ့ ဒီဆောင်းပါးအတွက် စာရေးသူကို ချီးကျူးလိုပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဧရာဝတီ ရေတိမ် မနစ်ရအောင် တတ်နိုင်သမျှ ကျနော်တို့အားလုံး လုပ်ဆောင် ရမယ်။ ဧရာဝတီ ကဗျာတစ်ပုဒ် ရေးပြီးသွားရင်ပို့လိုက်ပါဦးမယ်။
လာရောက်ဖတ်ပါ့မယ်ရှင် follower လဲတစ်ခါထဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်
Hi! Your blog looks interesting.It would be better if you visit my website too.!